စကားပုံ အသစ်ကလေးများ မြန်မာ ... အင်္ဂလိပ် ~ ITmanHOME
15:01 knowledge3comments
စကားပုံ အသစ်ကလေးများ မြန်မာ ... အင်္ဂလိပ်
အောက်ပါစကားပုံအသစ်ကလေးများ ဆောင်းပါး မှာ ၁၉၅၉ ခုနှစ်ထုတ်၊ တိုင်းရင်းမေ မဂ္ဂဇင်း၌ပါရှိသော တီထွင်ရေးထားသည့် အမျိုးသမီးစာရေးဆရာအသစ် တစ်ဦး၏ လက်ရာဖြစ်ပေသည်။ နယ်မှဖြစ်၏။ စာ အတော်ဖတ်သည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှန်း တွေးကြည့် လျှင် ရပါသည်။ သူ့ မြန်မာစာကောင်းလွန်း၍လော၊ ညွှန် ကြားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အနားမှာရှိနေသလော၊ မပြောတတ်ပါ။
ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်၍ မြန်မာ ... အင်္ဂလိပ် ယှဉ်တွဲဖတ်ရှုနိုင်ရန် Knowledge Bridge Internet မဂ္ဂဇင်း၌ အထူးစေတနာထားရေးသားလိုက်ပါ ကြောင်း။
(၁) အပြောယဉ်လျှင် ချစ်စရာ၊ သဘောစင်လျှင် မပစ်သာ။
Nice talks make love; Perfect attitude holds hands.
(၂) သင်တိုင်းလည်း မပေါက်ပါ၊ ခင်တိုင်းလည်း မထောက်ညှာ။
Teaching is not in touch for all; Every liking is not sympathy.
(၃) သွေးတိုင်းလည်း မထက်ပါ၊ ပေးတိုင်းလည်း မသက်ညှာ။
Sharping always-never be; paying always are notagood wish.
(၄) ဟောင်းတိုင်းလည်း မဆွေးပါ၊ တောင်းတိုင်းလည်း မပေးရာ။
Every old thing is not damaged; Give not the asking (need) often.
(၅) ကျွေးတိုင်းလည်း မခင်ပါ၊ သေးတိုင်းလည်း မယဉ် ပါ။
Serving can not be liked; Every small thing is not attractive.
(၆) သည်းခံလျှင် မမှားပါ။ အကျည်းတန်လျှင်လည်း မစားသာ။
It is right to be patient; Ugly face is to be avoided.
(၇) ဆေးတိုင်းလည်း မစင်ပါ၊ ပေးတိုင်းလည်း မကြင် နာပါ။
Every washing is not clean; Every giving is not for kindness.
(၈) ပြောတိုင်းလည်း မမှန်ပါ၊ ချောတိုင်းလည်း မဟန်ပါ။
Usually talk is not truth; Beauty is only for the skin mark.
(၉) မေးတိုင်းလည်း မဖြေရာ၊ ဆွေးတိုင်းလည်း မပြေပါ။
Don't be ready for any question; Sometimes regret never dies.
(၁၀) တွေးလို့လဲ မရေရာ၊ ဝေးလို့လဲ မနေသာ။
Unsettled thoughts! Getting away is impossible.
(၁၁) မေးတိုင်းလဲ မရပါ၊ ဖွေးတိုင်းလည်း မလှပါ။
Inquiries won't be favoured always; Even-white is notabeauty.
(၁၂) မ,တိုင်းလည်း မြွကပါ၊ သ,တိုင်းလည်း မလှပါ။
It is notamove trying to pick; Not lovely everytime making beauty.
(၁၃) ပွဲတိုင်းလည်း မကပါ၊ တွဲတိုင်းလည်း မရပါ။
Not to dance ever; Go together; stay closely, but not in married life.
(၁၄) သစ်တိုင်းလည်း မကောင်းရာ၊ ချစ်တိုင်းလည်း မပေါင်းပါ။
Every thing's new, but not good quality; Love but not to be getting married.
(၁၅) လူတိုင်းလည်း မအပါ၊ ချူတိုင်းလည်း မရပါ။
Every body is not foolish; persuading is not the winning.
(၁၆) ရစ်တိုင်း မယိုင်ပါ၊ ချစ်တိုင်းလည်း မပိုင်ပါ။
Not slant by winding; Possess not love.(Making love, but agree not)
(၁၇) နောက်ကျန်လျှင် မထောင်းသာ၊ ဖောက်ပြန်လျှင် မကောင်းပါ။
It is not negligible being left; Not good changing for the worse.
(၁၈) ဖြစ်လျှင် ပျက်တတ်သည်၊ သစ်လျှင် မက်တတ် သည်။
Occuring follows by raining; The new one is to be mostly fond of.
ပေါ် ဦး says:
28 June 2013 at 02:44 Reply
nanda shine says:
19 November 2013 at 20:19 Reply
koko ye says:
2 June 2014 at 21:06 Reply